Holdwin isina guruva sandblasting muchina wakanyorova jecha kuputika kabhineti
Pfupiso Yekukurumidza Dhizaina Muchina Type: SandBlaster Mamiriro: Nzvimbo nyowani yeKutanga: Zhejiang, China Zita reBrand: HOLDWIN Fuel: Electric Certification: ce, CSA Use: deburring cleaning blasting Kuchenesa Maitiro: Vapor Kuchenesa Rudzi rwekuchenesa: Chinyorwa Chinyorwa: Simbi / Coil Simba ( W): 750w Dimension (L * W * H): 900 * 600 * 520mm Warranty: 1 GORE Mushure mekutengesa Sevhisi Yakapihwa: Tsigiro yepamhepo, Overseas service centre inowanikwa Inoshanda Maindasitiri: G ...
Pfupiso Yekukurumidza Dhizaina Muchina Type: SandBlaster Mamiriro: Nzvimbo nyowani yeKutanga: Zhejiang, China Zita reBrand: Holdwin Certification: ce Warranty: 1 GORE Mushure mekutengesa Sevhisi Yakapihwa: Vhidhiyo technical technical Kiyi Kutengesa Points: Nyore kushanda mushure meWarranty Service. Maindasitiri Anoshanda: Zvivakwa Zvekuvakisa, Mashini Ekugadzirisa Mashopu, Kuvaka kunoshanda Yemunharaunda Sevhisi Nzvimbo: hapana Showroom Nzvimbo: hapana Kupa Mano ...
HOLDWIN Vhura mhando jecha kunyorera poto yakafa murume jecha nenyunje muchina wesimbi mamiriro
Pfupiso Yekukurumidza Tsanangudzo Mamiriro: Nyowani Nzvimbo Yekutanga: Zhejiang, China Zita reBrand: HOLDWIN Anoshanda Maindasitiri: Kugadzira Chigadzirwa, Kudhinda Shops kumanikidza: 4-8bar mweya unoshandiswa: 3.2m3 / min 22kw 30HP Tangi Dhayamita (mm): 600 Tank vhoriyamu (L ): 300 Pfuti nhamba / kamwene dhayamita (mm): 1/8 kana 10 kana 12 blasting hose lengh: 18.5m kureba 32mm blasting hose Dhayamita: 32mm kurodha hasha: Grit 500-600kgs Hasha: simbi grit, simbi kupfura (0.1-1.2 mm ...
Pfupiso Yekukurumidza Tsanangudzo Nzvimbo Yekutangira: Zhejiang, China Zita reBrand: Holdwin Type: Kukanda Zvikamu Zvinhu: aruminiyamu Anoshanda Maindasitiri: Zvivakwa Zvezvitoro, Machina Kugadzira Shops anokodzera hosipaipi: 1 `` 1 1/4 ''
HOLDWIN Jecha rinoputira ngowani
Lightweight piro foam padding inovimbisa kuti ngowani inogara kugara zvakanaka pamusoro
Iyo padding ndeye hokore uye chiuno chakasimudzwa uye chinobviswa nyore nyore kune hutsanana kuchenesa
Iko kuputira kukuru kwakatenderedza lens mbiri inobvumira kuona kwakaringana pasina kunetsa divi kupenya
Akapfura nenyunje kamwene / sandblasting mokugezera / Tungsten carbide kamwene
1. Yakanaka performace chivakwa chehasha kuramba, ngura kuramba, kugadzikana kwepfuma kuita uye hwakareba hupenyu hwebasa.
2.Mhando dzemhando yepamusoro dzinowanikwa maererano nedhirowa yako uye nekushandisa.
3. Boron carbide uye tungsten carbide nozzles zvese zvinogamuchirwa.
Rubber sandblasting hose 1 "1 1/4" Sandblaster Muchina zvikamu
Tube: dema antistatic abrasion inodzivirira yakasikwa rabha kemikari
Chisimbiso: neNylon tambo ply
Kavha: dema abrasion uye antistatic rubber.
Mafomu: yekuchenesa kwemaindasitiri, kucheka, kupukuta, kukanda masevhisi ekushandira.
Kupisa: -40 ° C + 80 ° C
Kurongedza:trans. PVC firimu
Sandblast magurovhosi akapfura nenyunje muchina spares
Kuongorora Zvidimbu Zvekukurumidza Mamiriro ezvinhu: Nzvimbo nyowani yeKutanga: China Brand Zita: Holdwin Anoshanda Maindasitiri: Zvivakwa Zvemashopu, Machina Kugadzira Shops, Kuvaka kunoshanda zvakapetana dhayamita: 30 cm uremu: 750-800g kureba: 68cm Mushure mekutengesa Sevhisi Yakapihwa: Kwete mushure- yekutengesa sevhisi Kugovera Mano Kugovera Mano: 1000 Pair / Pairs pamwedzi Kupakata & Kuendesa Kuteedzera Zvekuverenga 20pairs / katoni Port Ningbo Sandblast Magorovhosi Pfura nenyunje Mac ...
Sandblasting muchina zvikamu Inofema Inonyaradza Wear-Kuramba Sandblasting Machine Shongedzo
1.Premium Chinyorwa: Chikamu chemuchindwe chiri kukwirisa uye kusatsvedza dhizaini. Iyo yakasimbiswa yedhipatimendi reganda iri
kusapfeka nemishonga uye kusagadzikana nemisodzi. Dhipatimendi remaoko rinoshandisa chando chakasimba chekuvhara uye kufema.
2.Breathability: Iyo nyowani kanivhasi jira, iyo yekufema ndiyo yakawanda nguva yenguva dzose machira
jira rakakora, zvichiita kuti sandblasting oparesheni ive yakachengeteka.
3.Lightweight uye Zvichienderana: Leather nedehwe sandblasting muchina mavharuvhu;
yakakwidziridzwa sandblasting muchina yekutanga mamodheru; yakakodzera mhando dzese, dzakareruka uye dzinochinja-chinja, dzakakora uye dzinopfekwa.
Kukura Kwechigadzirwa: About 24.4in kureba, sleeve dhayamita 12.6in yakafara, uremu 240g, inochinja uye yakachengeteka mashandiro.
5.Wide Kunyorera: Inoshanda kune ese mamodheru, epakutanga michina.
Sandblasting magurovhosi rabha Magorovhosi Chipfeko magorovhosi Chipfeko 60cm
Yevashandi yekudzivirira magurovhosi PVC Sandblast magurovhosi 60cm Ruvara: girini,
nhema Chigadzirwa maficha Kureba kweiyo PVC zvinhu, 60 cm,
avirulent kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, interlock lining
apo kushandiswa kunogona kutora ziya, kwete kukanganiswa neganda;
Zvidimbu zvemichindwe zvakakora zvakapetwa kaviri zvakazara, chidimbu chemichindwe asi zvakare chengetedza chanza cheruoko rwako, kuti urembedzane pazvikamu.
Holdwin Mini Sandblasting Cabinet Inotakurika Sandblast Machine Mashoma Workpiece Yakareruka Sandblaster
Panogona kunge paine 0 kusvika 3cm musiyano nekuda kwekuyerwa kwemununifomu. Ndapota nzwisiswa usati watenga, ndatenda.
Iyi sandblaster kabhodhi idiki isina guruva muteresi
1. Iyo yakakodzera kune diki garaji, imba uye bhizinesi.
2. Yekushandisa negirazi mabhesi, silica jecha, alum oxide uye nezvimwe.
3.Kutsvuka kupedzisa simbi kabati ine yakajeka epurasitiki yemusuwo, inobatsira kuchengeta hasha yakaoma.
4. Irifomu rinobviswa rinochengeta zvikamu kubva mukunyungudika panguva yekuongorora nekuomesa
1. Yakanaka kune diki garaji, imba uye bhizinesi.
5. Mhepo compressor kuendesa ye40-80PSI @ 5CFM
HOLDWIN Nhema mapurasitiki O zvindori zve sandblaster kabati sandblast muchina zvikamu
Iyi mapurasitiki matema magurovhosi mhete anoshandiswa pane Sandblaster kabati.
Kunyangwe iwe uri kuvaka yako wega kabhineti, kana kukwidziridza, kit iyi inofanirwa!
Sikuruin'i iyi kumberi kwekabati rako, uye woisa gurovhisi. Kana yaiswa, inogona kubata magurovhosi panzvimbo.
Rabha O mhete ye sandblast magurovhosi
Pasuru: 2 pcs O mhete gurovhisi mubati